ဇရပ်: Custom Message အလန်းလေးများ
Custom Message အလန်းလေးများ
1.၂ယောက်ပျော်ရမယ့် အဖြစ်ကို မရနိင်ရင် ၂ယောက်ငိုရမယ့်အဖြစ်ကိုတော့ မလုပ်ချင်ဘူး …နင်ပျော်ပါ…ငါငိုမယ်ချစ်သူ……း )
2. ငါသာ လှေနံနှစ်ဖက်နင်းဖြစ်မယ် ဆိုရင်… နင့်ဘက်ကို ပိုပိုသာသာလေး နင်းပေးပါ့မယ် နင်လှေနစ်ပြီး မြန်မြန်သေအောင်လို့လေ..:P
3. အာဇာနည်ကခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွတ်တယ်…..ငါကတော့အဆိပ်ခပ်မယ်ရိုတ်သတ်မယ် လိုအပ်ရင်အက်ဆစ်နဲ့ပါပက်မယ် ဒါဘဲ နားလည်လား!!!!!
4. ချစ်သူ… မင်းငါ့ကို facebookမတွေ့ရင် onlineမှာလည်းလာမရှာနဲ့ သူများတကာတွေလို တခြားသူရင်ခွင်ထဲမှာလည်းသွားမရှာနဲ့ ချောက်ထဲခုန်းဆင်းခဲ့ ငါသိုင်းကျမ်းရှာနေတယ်….
5. ချစ်သူ… မင်းငါ့ကို facebookမတွေ့ရင် onlineမှာလည်းလာမရှာနဲ့ သူများတကာတွေလို တခြားသူရင်ခွင်ထဲမှာလည်းသွားမရှာနဲ့ မင်းမောနေမယ် ငါပုန်းနေတာ အရက်ဆိုင်နဲ့ ဘီယာဆိုင်မှာ…း)
6. ချစ်သူ… မင်းငါ့ကို ဖုန်းဆက်လို့မရရင် onlineမှာလည်းလာမရှာနဲ့ သူများတကာတွေလို တခြားသူရင်ခွင်ထဲမှာလည်းသွားမရှာနဲ့ မင်းမောနေမယ် မင်းရင်ခွင်ထဲငုံ့ကြည့်လိုက် ငါပုန်းနေတာ မင်းရင်ခွင်ထဲမှာလေ…း)
7. အရှေ့တွင်အချစ်မိုင်1500 ရှိသည် အမုန်းကျည်ဆံ မာနနှလုံးသား အသည်းခွဲဓား မျက်ရည်ဗုန်း တို့ကို528မိုင်တွင်ထားခဲ့ပါ…
8. မိုးမိုးကပြောတယ် ငါမှားလားမင်းမှန်လားတဲ့ လင်းလင်းကပြောတယ် ငါဘက်ကမှားတာပါတဲ G-Latt ကပြောတယ် နှစ်ယောက်စလုံးမှားခဲ့တယ် အောင်လကတော့ မှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ ကဲ….. ကြားထဲကငါက ဘာလုပ်ရမလဲ(တလောကလုံးမှားတယ်..ငါမှန်တယ်)
9. ဆရာ့ကို ဆရာလာမလုပ်နဲ့ ဆရာလည်း ဆရာ့ ဆရာတွေကို ဆရာမလုပ်ခဲ့ဘူး ဆရာ့ကို ဆရာလုပ်တာလည်း ဆရာမကြိုက်ဘူး ဆရာ့ကို ဆရာလုပ်ချင်ရင် ဆရာ့ထက် ဆရာဖြစ်အောင် ဆရာ့ဆရာတွေဆီမှာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း သွားတက်လိုက်
10. သတိ! နတ်ကြီးသည်… ဂွကြီးကြီးနှင့် ကြပ်ပါ မကြပ်တတ်လျှင် နတ်ပြုံးမည် နတ်ပြုံးလျှင် ပြန်ရီပြလိုက်ပါ…
11. အပေါဆုံးကပိတ်ဆံပဲ မွေးရာပါအားနည်းချက်ကဆော်ကြည်တာ စိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲမှာလေးစားမှုတွေအရမ်းရနေတာလည်းပါတယ် ဘာလုပ်လုပ်အောင်မြင်နေတော့ တခါတလေလည်း လေတာပေါ့
12. ငါနင့်ကိုချစ်တဲ့..အချစ်မျိုးနဲ. နင်တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို ချစ်တတ်လာမယ်.အချိန်ရောက်လာမှာ ငါအကြောက်ဆုံးပဲ။……..
13. ဖေဖော်ဝါရီ 14 ရောက်ခါနီးမှ ချောကလက်ကိုမျှော်ပြီး ရည်းစားလာမတော်နဲ့ ..လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လအတွင်းက ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရည်းစားကို ဇီးပြားတောင် ကျွေးဖူးတာမဟုတ်ဘူး …:P
14. ”ငါဟာ” …နင့်ရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဆိုရင် နင်နှုတ်ခမ်းထက် ငါကြွေကျပြီး နင့်နှလုံးသားထဲထိ စီးဆင်းမယ်။ နင့်သာ ငါရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဆိုရင် ဒီတစ်သက် ငါမငိုတော့ဘူး။ နင့်ကို ဆုံးရှုံးမှာစိုးလို့ပါ..
15. နင်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ နင့်ရဲ့အနားမှာ ငါရှိချင်…နင်နေခွင့်ပေးမလား…? ငါစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ နင့်ကိုစကားတွေ ငါပြောချင်…နင်နားထောင်ပေးပါလား…?
16. ပိန်တော့ဆေးသမား.. ၀တော့အရက်သမား.. ရည်းစားမရှိတော့အခြောက်.. ရှိတော့နှာဘူး.. နိုင်တော့ ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုး … ရှုံးတော့သောက်သုံးကိုမကျဘူး.. တစ်ခုမှမလွတ်တဲ့လောကကြီးပါလား
17. နင်စိတ်ပျက်အားငယ်နေတဲ့အခါ ငါ့ကိုခေါ်လိုက်ပါ နင်အငိုတိတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့တော့ ငါကတိမပေးနိုင်ဘူး သေချာတာကတော့ ငါနင်နဲ့အတူလိုက်ငိုပေးမှာပါ။
18. အကြင်နာမရ ၀ိုင်သာချ..အပီသာရင်ကွဲ ဘီယာဆွဲ.. အချစ်ကိုစိတ်နာ ဆေးလိပ်ဖွာ..အချစ်ကြောင့်ရင်ကွဲ ၀ီစကီဆွဲ…အချစ်ကိုသပိတ်မှောက် ထမ်းရည်သောက်..အချစ်ကိုမေ့ပစ် ဂိမ်းဆိုင်လစ်
19. အရှုံးလည်းမပေးတတ်ဘူး အနိုင်လည်းမယူတတ်ဘူး လိုချင်တာတော့ရှိတယ် နားလည်မှု……
20. အရောင်မရှိတဲ့ရေတောင် ပင်လယ်လုပ်ပြီး ပြာသေးတာပဲ Online ကလူတွေ မာယာနဲ့ညာနေတာလည်း မဆန်းပါဘူးလေ … ။
21. ချစ်တယ်နော် အလိုမလိုက်ဘူး….. ! ဖုန်း ၀ယ်ပေးမယ် လိုင်း မတပ်ပေးဘူး! အိမ် ၀ယ်ပေးမယ် အိမ်ထဲ ပေးမ၀င်ဘူး! ကား ၀ယ်ပေးမယ် ကားသော့ မပေးဘူး! အင်္ကျီ ၀ယ်ပေးမယ် ပေး မ၀တ်ဘူး ~~~~~~~~
22. **ငါနင့်ကို မမေ့ပါဖူး.. နင့်စိတ်ထဲ ငါမရှိတော့လို့ ငါနင့်ကို အေးစက်သွားတာ…. ငါနင့်ကို မမုန်းပါဖူး… နင့်အချစ် ငါ့အတွက်မဟုတ်တော့လို့ ငါနင့်ကို ရင်မခုန်တော့တာ….***
ဂေါ်လီလုပ်ပြီးစတန့်ထွင် ~~~ ၇ည်းစားကိုးယောက်.အဖတ်တင်…
(just funny )
24. ငါက နင်ပြုံးနေရင်!!~ ကျေနပ်သူ နင်ငိုနေရင်~~!အနေခက်သူ! !!နင့်ကိုမတွေရရင်!!မနေတတ်သူ~~ ~~နင်လိုသမျှ ~~ပေးဆပ်ချင်သူ ~~နင်မှားသမျှလည်း ~~မငြိုငြင်တတ်သူ~~!! နင့်ကို!! ဒီလို !!ရူးသွပ်သူ!!<~~ !_!
25. VALENTINE DAY မှာ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်စရာဆိုလို့ Monitor ရယ်.တယုတယကိုင်စရာဆိုလို့ Keyboard ရယ်..လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာဆိုလို့ Mouse ရယ် တီတီတာတာလေး ဆိုလို့ မီးပျက်ရင်အော်တဲ့ UPS …ပဲရှိတယ်…
26. ငါလွမ်းလို့သေသွားရင် တရားခံကနင်နော်……:P
27. အချစ်ဆိုတာ ငါ့အတွက်တော့ အပျင်းစားသံယောဇဉ်ဘဲ…….
28. My name is မဲတုတ်….I Live in တဲစုတ်…. I only eat ပဲပြုတ်… I walk in လမ်းစုတ်.. So I meet မိပုတ်… I give her အမှိုတ်ထုတ်… So she beats me with ထီးစုတ်…. And I run into တောအုပ်… I play with ကျားစုတ်… Now I am ၀ဲကုတ်… So my skin is ပြဲစုတ်… And I go to doctor ရမ်းတုတ်…..This message read မျောက်ရုပ်
29. ချောတာကြိုက်ရင် မင်းသားတွေရှိတယ်။ ချမ်းသာတာမှလိုချင်ရင် သူဌေးသားတွေရှိတယ်။ အပြောကောင်းတာကြိုက်ရင် ပွဲစားတွေရှိတယ်။ ဂုဏ်မက်တယ်ဆိုရင်လဲ စစ်ဗိုလ်တွေရှိတယ် ချစ်တတ်တာကိုပဲ လိုချင်တယ်ဆိုမှ ငါ့ဆီကိုလာခဲ့။
Posted by phyosuhan at 8/05/2011 05:06:00 pm
သံသရာ လမ်းညွှန် အဘိဓမ္မာ သင်တန်း
တိဗက်မှာ လူသေသဂြိုဟ်နည်း(-လူသားစားတဲ့ ငှက်တွေ )
Jailbreak for Ipad2
ဒီနေ့ဟာ ပန်းသီးလောကရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့် iPad2 သမားတွေအတွက် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ပါ၊ အကြောင်းရင်းကတော့ Jailbreak လုပ်လို့ရသွားပါပြီ...
နိဒါန်း ကျွန်တော် စာတွေ မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ ကျွန်တော် သိတာကို ပြန်မျှဝေတဲ့ သဘောပါဘဲ... တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တုို့ သတိထာ...
Earth From Above, Amazing Aerial Photography
A collection of aerial photography produced by Yann Arthus-Bertrand "Earth From Above" is the result of the aerial...